Manazava ny fomba tokony hiarovana ny tranonkalanao ny Semalt
Ny aterineto dia loharano goavana iray izay manana fahafahana tsy voafetra. Vokatr'izany, ny aterinetoNy sehatra dia manome fomba maro ahafahan'ireo marika sy fikambanana afaka hihaona amin'ny mpihaino sy ny tsena tsy voafetra.Maro ireo mpandraharaha no maka ny fomba fikarakarana e-varotra mba hananganana ny tranonkalany sy hananganana ny fampielezan-keviny. Misy koabilaogera maro manana bilaogy mahomby maro an-tserasera. Rehefa mihazakazaka tranonkala e-commerce, ny fiarovana azy ireo dia antony iray amin'ny maro hafaMila mandinika ianao.
Rehefa manao tranokala isika, dia mifantoka amin'ny fanaterana ny serivisy, ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa, aryny fitakian'ny UX - purple efest 18650 cheap. Ny ankamaroan'ny teknolojia ara-barotra izay mampiasa tranonkala dia ahitana ny fomba fitadiavam-panadiovana (SEO) toy ny teny fanalahidyfikarohana sy fifandraisana. Ny tanjon'ity hackera ity dia manohitra ny vohikala dia tsy hevitra iray izay mitaingina ny sainan'ny ankamaroan'ny olona.
Rehefa mianatra ny fomba hisorohana ny fanafihana mahery fihetsika, dia zava-dehibe ny ianarana ny sasanyteknika izay afaka misoroka hacks mahazatra. Nik Chaykovskiy, Tale Mpitarika Success Successor Semalt Sampan-draharaha nomerika, dia maneho ny fahatsapanao mahazatra sy ny fomba hanalavirana azy ireo:
Fampandrenesana ny vaovao.
Anisan'izany ny fanafihana mety hampidirana hafatra fandefasana sy fangatahana an-tserasera. Rehefa manao tranonkala iray,Zava-dehibe ny manamboatra ny saha anarana na tsy misy vidiny. Ity fepetra ity dia mety handà fanazavana iray sarobidy izay azon'izy ireo ampiasainamanamboatra ny fanafihany. Amin'ny toe-javatra hafa, ny hafatra diso dia mila teny mahasoa. Ny fahadisoana sasany dia afaka manome hackers hevitra momba nyvulnerability of the system..
Fanakanana ny kaonty.
Io endri-javatra io dia ahafahana manakatona kaonty rehefa tapitra ny fanandramana misimisy.Ny famoahana fisedrana voafetra sasany dia manome ny kaonty mpampiasa ilay niharam-pahavoazana ho an'ny tombony ho an'ny fiarovana amin'ny hack. Afaka mampiasa ny tenimiafina azo antokafepetra lehibe izay azon'ny olona ampiasaina hanatsarana ny fiarovana ny tranonkala. Ny code Captcha dia afaka misoroka ihany koa ny logins automatique izayafaka avy amin'ny bots. Manome antoka ihany koa izy ireo fa olona tena mampiasa ny tranokala, fa tsy robot.
Ny fitetezana ny tenimiafina.
Zava-dehibe ny mampiasa ny tenimiafina azo antoka indrindra indrindra eo amin'ny sehatry ny admin ao amin'ny tranonkalanao.Ny tenimiafina azo antoka dia afaka misoroka ny tranokalanao amin'ny fanafihana tsotra tsotra. Ny tenimiafina tahaka ny 12345 dia tsy azo antoka ary mety hitarika amin'ny fanafihana voajanahary.Zava-dehibe ny hampiasa ireo mpamorona ny tenimiafina mba hahatongavana amin'ny tenimiafina tokana. Zava-dehibe koa ny manova ny tenimiafinao. ianaodia afaka manatsara ny fiarovana amin'ny tranonkalanao toy izao.
Maro ny fomba ahafahan'ny hackers mankany amin'ny tranonkala iray. Ny sasanyNy fomba mahazatra indrindra amin'ny alalàn'ny hackers hack ny tranonkala dia ahitana SQL Injection sy Cross Site Scripting. Zava-dehibe izanyhanatsarana ny fiarovana ny tranokalanao sy ny an'ny mpanjifanao amin'ny alalan'ny fomba fanoritsoritr'ilay toro lalana etsy ambony.Azonao atao ny manatsara ny fomba fitantanana tranonkala iray sy ny fisorohana ny vintana amin'ny hacker izay manenjika ny tranonkala.Ny fiarovana amin'ny fampiasana aterineto ny tranonkalanao dia eo an-tanan'ny admin. Ny Hacker dia afaka mangalatra ihany koa ny fampahalalana sarobidytoy ny carte de crédit. Zava-dehibe ny mandinika an'io lafiny io rehefa manamboatra tranokala.